नेपाल आज | काठमाडौं आउँदा खाना पकाउने भाँडामात्र लिएर आएका जीवन, सिलाइ व्यवसायपछि मालामाल(भिडियो सहित)
भिडियो मेरो परिवार मेरो कथा कभर स्टोरी
काठमाडौं आउँदा खाना पकाउने भाँडामात्र लिएर आएका जीवन, सिलाइ व्यवसायपछि मालामाल(भिडियो सहित)
काठमाडौं । अर्घाखाँचीका जीवन परियार वि.सं २०५३ सालमा काठमाडौं आउँदा साथमा खानापकाउने भाँडाकुडामात्र लिएर आएका थिए । काठमाडौं आए लगत्तै बागबजारको चर्चित ‘श्रेष्ठ टेलरिङ’ मा काम थालेका उनले त्यसको दश वर्षपछि आफैं एक व्यवसायीको रुपमा उदाए ।
दश वर्षको सिलाई अनुभव बोकेर उनले बुटवलमा सेवा दिने निर्णय गरे । काठमाडौंमा भएको प्रतिष्ठित टेलरिङको जागिर छोडेर बुटवलमा गएर व्यवसाय गर्छु भन्दा सुरुमा उनलाई धेरैले सम्झाउन खोजे । ‘महावीर पुनले यदि चाहेको भएर अमेरिकामा गएर बस्न सक्थे । तर म्याग्दीमा आएर त्यहाँका जनतालाई इन्टरनेटको सेवा दिएर किन बसे ?’ आफू पनि महावीर पुनबाट प्रभावित भएको भन्दै उनले भने, ‘मैले पनि सोचें, बुटवलका मानिसलाई सेवा किन नदिने ?’
यही उद्देश्यले सुरु भयो उनको बुटवलमा नयाँ टेलरिङ व्यवसाय । ‘श्रेष्ट टेलरिङ’ नाम राखेर उनले व्यवसाय सुरु गरे । सुरुवाती दिनमा ग्राहक तान्नै धौ धौ हुन्थ्यो । दिनभरी पसलमा बसेर रातभरी सिलाइमा खट्थे उनी । अर्घाखाँचीको चिसो र काठमाडौंको मध्यम स्तरको मौसममा बस्ने बानी परेको उनलाई बुटवलको गर्मीले हायलकायल बनाउथ्यो । निद्रा नपुगेर कतिपटक पसलको काउन्टरमा भुसुक्कै निदाउँदा ग्राहकले साहुजी त कत्ति सुत्ने पनि भन्थे । रातदिन नभनी उनले निकै समय लगाएर आफ्नो ब्राण्ड स्थापित गराए ।
ग्राहकलाई दिने गुणस्तरमा पनि कुनै सम्झौता नगरेपछि उनको टेलरमा अहिले कपडा सिलाउनेको ठूलो भीड लाग्ने गर्दछ । अहिले बुटवलका मन्त्रीदेखि सांसद र धनाढ्य व्यापारी परियारको ‘श्रेष्ट टेलरिङ’ मा पुग्छन् । आफ्नो टेलरमा उच्चस्तरीयदेखि लिएर सामान्य सबै व्यक्ति आउने हुँदा यसलाई नै ठूलो सन्तुष्टिको आधार मान्छन् उनी ।
पढ्न भनेर अर्घाखाँचीदेखि काठमाडौं आएका उनले विविध कारण र बाध्यतावश आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । पढ्नु भन्दा पनि काम सिकेर ठूलो मान्छे बन्नु नै उनको उद्देश्य थियो । अहिले सिलाइ क्षेत्रमा आउनेहरूले त्यत्ति धेरै हन्डर खानु नपर्ने उनको भनाई छ ।
आफ्नो कार्यकालमा परियारले धेरै चर्चित व्यक्तिको कोट सिलाउने मौका पाए । ती मध्येमा शान्ति सम्झौतापछि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र स्वर्गीय पूर्व यूवराज दीपेन्द्र शाहको कोट सिलाउन पाउनु उनको लागि गर्वको विषय थियो ।
आफैं सीप सिकेर केही गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ काठमाडौं आएका परियार अहिले सफल व्यवसायमध्येमा पर्छन् । कुनैपनि काममा सफल बन्न आफ्नो पेशाप्रति इमान्दारिता र निरन्तरता आवश्यक हुने उनको बुझाइ छ । आफ्ना कमी कमजोरी आफैंले औंल्याएर त्यसलाई सुधार्न सक्नु नै महत्वपूर्ण भएको उनी बताउँछन । काठमाडौंको श्रेष्ठ टेलरिङमा उनले धेरै कुरा सिक्न पाएसँगै आफूलाई सुधार्ने मौका पनि पाए ।
हाल उनले आफ्नो व्यवसायमार्फत २० जनालाई रोजगारी दिएका छन । आफूले यत्तिका मान्छेलाई रोजगार दिएर बसेपनि राज्यले दलित बनाएकोमा भने उनको गुनासो छ । भन्छन्, ‘मलाई दलित भनेको मन पर्दैन । जब कि, म आफैंले १५, २० जनालाई रोजगार दिएर बसेको छु ।’
सामान्य परिवारबाट काठमाडौं आएर सीप सिकी यत्तिको गर्न सक्नु भनेको ठूलो उपलब्धी मान्छन् उनी । त्यसकारण नेपालमा मेहनत गरेर केही गर्ने हो भने समस्या नहुने उनको धारणा छ । सिलाइ व्यावसायमा नै धेरै राम्रो अवसरहरु भएपनि मानिसहरू स्वदेशमा केही नगर्ने तर विदेशमा जे गर्न पनि लाज नमान्ने प्रवृतिप्रति उनको गुनासो छ । ‘मेरै काममा अधिकांश मानिस भारतीय नागरिक छन् । यदि त्यही काम नेपालीले गरेको भए, त्यो पैसा त यहीं हुन्थ्यो’, उनले भने ।
व्यवसाय गर्दै गर्दा उनको व्यवसायमा उतारचढाव आए । विभिन्न समस्यामध्येको जटिल परिस्थिति थियो उनको पसलमा आगलागी हुनु । वि. सं २०७१ सालमा पसलमा आगलागी भछि उनको व्यवसाय धरापमा प¥यो । पछि आफन्त, इष्टमित्र र रुपेन्देही पटोती सम्पर्क समाज भन्ने संंस्थाको सहयोगले आफू फेरि उभिन सकेको उनले बताए ।
उमेरले ४३ को हाराहारीमा पुगिसकेका परियार आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छन् । एक सफल व्यवसायी हुनको लागि घर परिवार अतिआवश्यक भएको उनले आत्मसात गरेका छन् ।
सिलाइ व्यावसायमा लागेको दुई दशक भन्दा धेरै भइसक्दा पनि अहिलेसम्म काम बिगारेर कुनै पनि ग्राहकको गाली खान नपरेको उनले गर्वसाथ सुनाए । व्यवसाय सफल बनाउन उनीसँग एकमात्र मन्त्र छ । भन्छन्, ‘गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुहुँदैन, ग्राहक आफैं आउँछन् ।’
अहिले पनि जीवन विहान ५ बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म काममा खटिरहेका हुन्छन् । उनको लागि ग्राहक भगवान हुन् । ‘उहाँहरुसँग तितो होइन राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने मैले सिकेको छु’ भन्दै उनले थपे, ‘व्यवसायलाई निरन्तरता दिने र जति सक्दो ग्राहकको सेवामा खट्ने नै भावी योजना छ ।’
जीवन परियार ‘श्रेष्ट टेलरिङ’